June 2020 – Gulled Salah
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada .
Waxaa maalintii labaad sii socday hubinta Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland ku sameenayeen xafiisyada Ururada Siyasadda Puntland ee magaalada Garowe. Guddiga oo uu horkacayo gudoomiyaha Guddiga Mudane Guuleed Saalax Barre ayna weheliyaan xubno iyo saraakiil ka tirsan Guddiga ayaa waday kormeer ay ku sameenayeen xafiisyada Ururada Siyasadda si loo hubiyo in Ururadu leeyihiin xarumo leh astaamihii …
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada . Read More »
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada.
Guddiga doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa saaka ka bilaabay magaaladda Garoowe hubinta xafiisyada ururada siyaasadda, taas oo qayb ka ah nidaam lagu hubinayo sida ay ufuliyeen Ururadu shuruudaha isdiiwaangelinta. Maanta Guddigu wuxuu booqday xafiisyada Ururada Bakaal, Caddaaladda iyo Sinnaanta, Mustaqbal, Mideeye, Kaah iyo Himilo.Hubinta xafiisyada ururada ee magaalada garoowe …
Guddiga doorashooyinka Puntland oo bilaabay hubinta xafiisyada ururada siyaasada. Read More »
Guddiga Doorashooyinka ayaa saaka la kulmay masuuliyiin ka socota Agaasinka Maamul Wanaagga Puntland.
Gudoomiyaha Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland oo ay weheliyaab qaar kamida xubnaha Guddiga, ayaa saaka la kulmay masuuliyiin ka socota Agaasinka Maamul Wanaagga Puntland oo uu hogaaminayo Agaasimaha Guud Mudane Cabdiraxmaan Cali Guureeye. Ujeedka kulanka ayaa ahaa in Hay’adda Maamul Wanaaggu la wadaagto TPEC habraaca Maamul wanaagga ee u degsan Puntland iyo sida hay’adaha dawladda ay …
Guddiga Doorashooyinka ayaa saaka la kulmay masuuliyiin ka socota Agaasinka Maamul Wanaagga Puntland. Read More »
Kulanka Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo Ururada Siyaasadda.
Galabta, 22-June-2020, Guddiga Doorashooyinka xaruntiisa dhexe ee Garoowe waxa ay mid mid uga guddoomeen Ururada Siyaasadda qayb ka mid ah shuruudaha diiwaangalinta ee wajiga 2aad oo waqtigii loo qabtay uu maanta ku ekaa. Shirka oo ay fadhiyeen wakiilada dhowr iyo toban urur-siyaasadeed, Guddigu wuxuu ku dhawaaqay in 12 Urur siyaasadeed ay soo gudbiyeen shuruudihii una …
Kulanka Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo Ururada Siyaasadda. Read More »
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa caawa marti ku ahaa kulan ku saabsanaa Doorka bulshada rayidka ee doorashada soo socota ee puntland.
Gudoomiyaha guddiga KMG doorashooyinka Puntland Guuleed saalax barre ayaa caawa marti ku ahaa kulan ku saabsanaa doorashada soo socota ee puntland,Doorka bulshada rayidka ay ku leeyihiin geedi socodka doorashooyinka oo ay soo qaban-qaabisay Dallada Bulshada rayidka ah ee Puntland (PUNSAA). Gudoomiyaha guddiga ayaa ka hadlay doorka bulshada rayidka kuleeyahay ka qaybgalka doorashada soo socota ee …
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa caawa marti ku ahaa kulan ku saabsanaa Doorka bulshada rayidka ee doorashada soo socota ee puntland. Read More »
Waxaa maanta 14 June 2020 kulan ku yeeshay xarunta PDRC Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo ururrada siyaasadda.
Waxaa maanta 14 June 2020 kulan ku yeeshay xarunta PDRC Guddiga Doorashooyinka Puntland iyo ururrada siyaasadda. Read More »
Guddiga doorashooyinka ayaa saaka kulan la yeeshay Guddi Hoosaadka Shuruucda, Caddaaladda iyo Dimuqraadiyadda Baarlamaanka PL.
Guddiga doorashooyinka ayaa saaka kulan la yeeshay Guddi Hoosaadka Shuruucda, Caddaaladda iyo Dimuqraadiyadda Baarlamaanka PL. Read More »